Inona no atao hoe Remote Sensing? | Fiaretana haran-dranomasina
Remote Sensing dia ny "fahazoana vaovao momba ny zavatra iray nefa tsy mifandray ara-batana aminy" (Elachi and van Zyl 2006).
Raha te hahalala lalina momba ny fahatsapana lavitra sy hanapa-kevitra raha toa ka afaka manampy anao amin'ny asa fitehirizana ny vokatra lavitra ny fahatsapana lavitra dia raiso ny lesona 1: Fampidirana momba ny Remote Sensing sy ny Coral Reef Mapping an'ny Mazava ho azy fa amin'ny Internet misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFahatsapana lavitra sy fanaovana sarintany lavitra momba ny fiarovana ny haran-dranomasina.
Fitsipika momba ny fahatsapana lavitra
Ny Remote Sensing dia misy fifandraisana eo amin'ny hazavana sy ny zavatra mahaliana (haran-dranomasina, hazo, saha, sns.). Misy singa enina lehibe:
A loharanon'ny hazavana - na avy amin'ny masoandro na ara-dalàna
An zavatra mahaliana (oh: vatohara, hazo, trano)
A sensor nitaingina lampihazo (oh: zanabolana, fiaramanidina, drone), izay manangona taratra taratra na avoakan'ny zavatra mahaliana
A receptor ety an-tany na eny amin'ny habakabaka izay hahazo fampahalalana avy amin'ny sensor
A rafitra handikana ny fampahalalana mahatsapa lavitra ho data
manam-pahaizana izay afaka mandika angona ho sari-tany
Zahao ny sary etsy ambany raha hanehoana ny rafitra fantsom-pahalalana lavitra mifototra amin'ny satelita.
Ohatra iray amin'ny rafitra satellite sensing remote mifototra amin'ny satelita. Sary © The Conservancy voajanahary
Ny fahatsapana lavitra dia mifototra amin'ny fitsipika fa misy foana ny fifandraisana eo amin'ny taratra electromagnetic (hazavana) sy ny zavatra iray. Mitroka, mamerina, manaparitaka, mampita na mampihemotra taratra ny zavatra. Ny zavatra miverina dia miverina taratra amin'ny sensor lavitra amin'ny fomba samihafa arakaraka ny habeny, ny orientany, ny volony, ny lokony, na ny endriny simika.
Ohatra, ny fasika fotsy maina dia manana albedo avo ary tsy hamiratra kokoa noho ny fotaka mando sy mainty. Ny fahasamihafana amin'ny lamina re ﬂ ection no mamorona sonia spectral tsy manam-paharoa ary mamela ny fanavahana ny toeram-ponenana, ny zavatra na koa ny firafitra.
Ireo halavan'ny onja dia hitan'ny sensor ary novain'ny solosaina ho data. Izany dia ahafahana manangona vaovao ankoatry ny sary fotsiny, toy ny mari-pana, ny firafitry ny simika, ny haavony, na ny atin'ny hamandoana any lavitra any amin'ny mizana lehibe. Ireo manam-pahaizana manana fahaiza-mahatsapa lavitra sy fanaovana sarintany lavitra dia mandika ireo angona vokarin'ny solosaina ho sari-tany. Ny sari-tany dia vonona hampiasain'ny tsy manam-pahaizana amin'ny fampiharana toy ny sarintany fandraisana anjara izay manambatra ny fahalalana eo an-toerana sy ny angona jeografika.
Ny sensor dia sokajiana ho mavitrika na passive arakaraka ny loharano azony. Izy ireo dia azo apetraka amin'ny sehatra samihafa toy ny satelita, fiaramanidina, na drôna koa.
Fahasamihafana eo amin'ny sensor sensive passive sy mavitrika amin'ny fahatsapana lavitra. Sary © The Conservancy voajanahary
Passeur Sensors mirakitra angovo voajanahary izay nalaina na nipoitra avy teto ambonin'ny tany. Ny loharanon'ny taratra mahazatra indrindra hitan'ny sensor passive dia ny tara-pahazavana. Ohatra iray amin'ny sensor passive dia fakan-tsary miaraka amin'ny ﬂ ash maty.
Sensors miasa manome ny loharanon'angovo azy manokana, toy ny taratra elektrika na laser na microwave, hanazava ireo zavatra hitany. Ny sensor iray mavitrika dia afaka miasa andro aman'alina amin'ny alàlan'ny famoahana taratra amin'ny alàlan'ny tanjona kendrena. Ohatra iray amin'ny fakan-tsary mavitrika dia fakan-tsary miaraka amina ﬂ lavenona.
Ny sary zanabolana sy an'habakabaka dia vita amin'ny pixel, namboarina anaty takelaka, toy ny sary azo avy amin'ny fakantsary nomerika. Ny pixel tsirairay dia misy fampahalalana isa maneho ny famirapiratan'ny faritra tsirairay misy sanda isa. Sensors dia hisambotra ny famirapiratan'ny faritra amin'ny halavan'ny halavany. Ohatra, ny sensor ao amin'ny zanabolana WorldView 2 dia maka sary mampiasa tarika sivy amin'ny halavan'ny halavany raha ampitahaina amin'ny sensor Planet Dove izay tsy mampiasa afa-tsy efatra. Ny sensor WorldView 2 dia manana fatran'ny spectral ambonimbony kokoa.
Fampitahana ny famahana ny spectral eo anelanelan'ny sensor multispectral an'ny planeta Dove (tarika 4) nampiasaina hisamborana sary haran-dranomasina ho an'ny Allen Coral Atlas sy ny sensor multispectral (bandy 2) an'ny WorldView-9. WorldView-2 dia manana fehin-kevitra spectral ambonimbony kokoa. Sary © DigitalGlobe
Ny zavatra tsirairay eto ambonin'ny tany dia manana sonia tsy manam-paharoa spectral, fomba tokana hita taratra ny hazavana. Arakaraky ny fantsom-pandrefesana spectral misy ny sensor, no tsara kokoa amin'ny fakana ireo sonia spectral ireo ary mampiseho ny fahasamihafana misy eo amin'ny zavatra.
Sonia Spectral ny kilasy benthic sy substrate samy hafa refesina anaty rano ao amin'ny Heron Reef, Aostralia. N dia ny isan'ny santionany refesina hahazoana ny fiolahana. Loharano: Leiper et al. 2014
Iza amin'ireo tarika no ilaina indrindra amin'ny fanaovana sarintany ireo endrika anaty rano toy ny haran-dranomasina?
Ny rano dia mitelina ny ankamaroan'ny taratra tonga manerana ny halavan'ny lava-bato ao anatin'ny metatra voalohany halalinany. Ny halavan'ny halavany izay afaka miditra amin'ny tsanganana rano dia ny tarika hita maso, aerosol amoron-tsiraka, manga, mena, mavo ary maitso. Voaravaka voalohany ny jiro mena, arahin'ny maintso, avy eo ny jiro manga izay mametra ny fandinihana ny fisehon'ny rano ao anaty lalindalina kokoa, na dia amin'ny rano madio indrindra aza. Avy amin'ireto tarika hita maso ireto dia manandrana mamoaka sonia ny spectral an'ny fiasa anaty rano toy ny haran-dranomasina, ahidrano ary ahidrano isika.
Ny loko marevaka amin'ny haran-dranomasina. Sary © Jeff Yonover